DF oo sheegatay in ay dileen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo sheegatay in ay dileen dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab
Afhayeen u hadlay ciidanka Xoogga dalka ayaa sheegay in dileen dagaal-yahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay ku dagaallameen gobolka Shabeelaha dhexe.
JOWHAR, Soomaaliya - Afhayeenka ciidanka xoogga dalka Kornayl Cali Xaashi oo la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay inay dileen in ka badan 70 ka tirsanaa maleeshiyadka Al-Shabaab, isla markaana ay Ciidamada ka soo hooyeen guulo la taaban karo dagaal ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe.
“Ciidamada waxa ay ka dagaallameen aagag fara badan, jab xoog leh ayaana u geysanay argagixisada Al-Shabaab, dagaalka xoogiisa waxa uu ka dhacay Warta Jilaable oo hadda noqotay meel dhiigooda uu qariyay biyaha Warta” ayuu yiri Kornayl Cali Xaashi.
Toddobaadyadii u dambeeyay waxaa dhacay iska hor imaadyo udhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa Nabad ilaalinta AMISOM ee ku sugan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya oo isku dhinac ah iyo kuwa ururka Al-Shabaab, waxaana ka dhalanayay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo gaaray.
DF ayaa inta badan dagalladaasi ka sheegtay guulo, waxayna burburiyeen hub iyo saanad dagaal oo badan kuwaasoo lagala wareegay kooxda, waxaana lasoo bandhigay tiro ciidamada kooxda Al-Shabaab ka tirsan kuwaasoo lagu laayay dagaallo ka kala dhacay dhowr goobood oo kala duwan.
Kornayl Cali Xaashi oo ah afhayeen u hadlay ciidamda xoogga dalka ayaa sheegay inay Warbaahinta la soo wadaagi doonaan qasaaraha dhabta ah ee ay ciidamada u geysteen maleeshiyada Al-Shabaab, maadama ay ciidamadu ku howlanyihiin howlgallo amniga lagu xaqiijinayo.
Inkastoo dowladda Soomaaliya ay sheeganeyso guulo waa weyn in ay gaareen ayaa dhanka kale la xaqiijiyay geerida sarkaal muhiim u ahaa ciidamda dowladda Soomaaliya kaasoo ahaa taliyihii guutada lixaad ee ciidamada Gorgor Maxamed Cabdiwaaxid waxa uuna ku dhintay dagaal maalin kahor ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe oo kooxda Al-Shabaab looga hortagay.